जानकारी – ताजा समाचार
महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ । नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रुपमा यौ;न स;म्पर्क, वी;र्य स्ख;लन, […]
काठमाडौँ / लाखौं मानिस संक्रमित र हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसका वारेमा बजारमा अहिले विभिन्न आकलनहरु गरिएका छन् । बास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन नसकिएकाल अहिले विभिन्न हल्लाको भरमा विश्वास गर्नु परिरहेको छ । मदिर सेवनदेखि तातोपानीले नुहाउँदा सम्म भाइरस पर्छ भन्ने गलत अफवाह फैल्याइएको छ । यी सबै अफवाह भएको यथार्थ नभएको […]
‘एक महिनाअघि भारत जुन ठाउँमा थियो, हामी त्यहीँ छौँ’
डा. अनुप सुवेदी, संक्रामक रोग विशेषज्ञ नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना बेस्सरी फैलिन थालेको छैन । यसको मतलब, नेपालमा कति फैलिएको छ भन्ने थाहा छैन । हामीले जताजता खोज्यौँ, त्यता-त्यता पायौँ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमबाट संकलन गरिएका नमुनाको नतिजा आउन बाँकी छ । त्यो आएपछि हामी धेरै कुरा भन्न सक्ने हुन्छौँ । तर, त्यस्तो किसिमको टेस्ट देशभर गर्नुपर्छ […]
कोरोना बारे नयाँ तथ्य फेला, २७ फिट टाढासम्म फैलिन्छ भाइरस
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका २०९ देशमा फैलिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि हरेक देशले सामाजिक दूरी कायम राख्न अपिल गरिरहेका छन्। हालै सामाजिक दूरीका बारेमा अमेरिकामा भएको अध्ययनबाट नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कोरोना भाइरसविरुद्ध जुन सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ त्यो त्यति प्रभावकारी नरहेको अथ्ययनले देखाएको छ। यसले संक्रमण फैलिनका लागि […]
काठमाडौं – कोरोना महामारी नेपालमा पनि भित्री सकेको छ। हालसम्म ९ जनामा यसको संक्रमण देखिएको छ। जसमध्ये एक जना उपचारपछि सन्चो भएर घर फर्किसकेका छन् भने ८ जना आइसोलेसनमा छन्। संक्रमण देखिएका ८ जना विदेशबाट आएका हुन्। उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको नमूना परीक्षण गर्न सकिएको छैन। शंकास्पदहरुको नमुना परीक्षण गर्न सके यहाँको बास्तविक विवरण आउने कतिपयले […]
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरण सुरु भएको छ । आज पहिलो पटक नेपालभित्रै एकबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सरेको पुष्टि भएसंगै नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो । आज शनिवार एकै दिन थप ३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार आज शनिवार थप ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । […]
तामामा भन्दा स्टिल र प्लाष्टिकमा धेरै बाँच्छ कोरोना भाइरस
ताजा समाचार । ६ चैत काठमाडौं : नयाँ कोरोना भाइरस हावामा वा सतहमा कति समय सम्म टिक्न सक्छ भन्ने विषयमा बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले स्टिल र प्लास्टिकको सतहमा यो तीन दिनसम्म जिवित रहन सक्ने पाइएको छ । न्यू इङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा […]
ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट के हो ? कसरी छान्ने ?
ई.अभिनय जयसवाल, अर्घाखाँची सिमेन्ट विश्वमा १५ भन्दा बढी किसिमका सिमेन्ट छन् । नेपालको चलनचल्तीमा आएको ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट हो । ओपीसी भनेको ‘अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट’ र पीपीसी भनेको ‘पोर्टल्यान्ड पोजालोना सिमेन्ट’ हो । ओपीसी र पीपीसी बनाउने आधार भनेको क्लिङ्कर हो । चुन ढुङ्गा, आइरनलगायत चार सामग्री मिश्रण गरेर क्लिङ्कर उत्पादन हुन्छ । क्लिङ्करको […]
ताजा समाचार । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपालमा भाइरसको उच्च खतरासँगै त्रास पनि बढ्दो रहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य संघसंस्थाहरूले विभिन्न सावधानी अपनाउन आह्वान गर्दै आएका छन् । कोरोनाबाट बच्नका लागि हातको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाहेक मानिसले आँखा, […]
दुधसँग खान नहुने १२ खानेकुराहरु जसका बारेमा थाहा नपाएर हामी बिरामी हुन्छौं
दुध सामान्यतया हानीरहित पोषिलो पदार्थ हो भन्ने मानिन्छ । अझ भैसी भन्दा गाईको दुध जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैले पिउँन सकिने भनेर धेरै बिरामीहरुलाई सिफारिस पनि गरिन्छ । तर दुधका पनि आफ्नै सिमाहरु छन् । जुनसुकै खानासँग दुध खाने हो भने अथवा दुध खाने बित्तिकै ति कुराहरु खाने हो भने शरिरमा हानी गर्छ । यस्तै कुरा थाहा […]
तपाईंलाई रुघा, मर्की वा कोरोना भाइरस के लागेको हो? कसरी थाहा पाउने?
ताजा समाचार । १ चैत, काठमाडौं : नेपालमा अहिले हिउँद सकिएर न्यानो सिजन सुरू हुने बेला भएको छ। त्यसमाथि दिनदिनै मौसम र तापक्रम परिवर्तन भइरहेकाले धेरैलाई रुघाखोकी लागेको छ। कसैलाई ज्वरोसहित मर्की (फ्लु) पनि देखिएको छ। संसारभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेका बेला आफूलाई सामान्य रुघा लाग्दा पनि धरैलाई चिन्ता हुन्छ- कतै मलाई पनि कोरोना भाइरसको […]
कोरोनाबाट बच्न घरमै कसरी बस्ने क्वारेन्टाइन ?
ताजा समाचार । १ चैत काठमाडौं : सरकारले रुघाखोकी र सामान्य ज्वरो आएका तथा विदेशबाट फर्किएकालाई १४ दिनसम्म घरमा छुट्टै बस्न अनुरोध गरेको छ । १ सय ४ डिग्रीभन्दा माथि ज्वरो आए तत्काल अस्पताल जान र सामान्य ज्वरो र रुघाखोकी लागेमा चाहिँ घरमै क्वारेन्टाइनमा अर्थात छुट्टै बस्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । […]